Ubulewe Onqabe Ukupita – eHowzit
Ubulewe Onqabe Ukupita
USAGCWELE amathafa owesilisa (40), obengunogada enkampanini iMbube, osolwa ngokugwaza abulale isinqandamathe sakhe ngemuva kokuthi sinqabe ukuyokipita naye elokishini laseVryheid.
UNksz Nikeziwe Mkhize (25), ushonele esibhedlela ngemuva kokuthi umsolwa emnqumise okwembuzi ngenxa yempi ebe phakathi kwabo.
Lesi sigameko namanje esisengundabamlonyeni senzeke ngeledlule lapho bekuqashe khona umufi njengoba ebesebenza esitolo sakwaShoprite, eVryheid kodwa engowokuzalwa eNtanyandlovu, eNquthu.
Udadewabo kamufi uNksz Hlengiwe Mkhize uthe namanje basathukile ngokwenzekile njengoba umsolwa ubehlala emtshela umufi ukuthi abazohlala ndawonye kodwa yena anqabe ukuhlala naye.
“Ngosuku okwenzeka ngaso isigameko kwakusebusuku ngo-12 kwangena ucingo lwakhe nokwathi uma ngilubamba kwangakhuluma muntu lwavaleka. Ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi i-network iyahlupha kodwa kwaphela isikhashana waphinde wafona ekhala wathi uselimele ucela sizomsiza,” kusho uNksz Mkhize.
Uthe wacela umqashi wakhe ukuthi ahambe ayobheka ngoba yena wayengeke akwazi ukufinyelela emqashweni kadadewabo.
“Ubaba engamcela ukuthi akamhambise wamfica ephuma igazi egwazeke kabi ngoba nami ngamfonela ngimbuza ukuthi umfice enjani wathi ubelimele kanzima. Ekuseni ngavuka ngaya esibhedlela eVryheid amanesi athi ukhona ubesathungwa lapho elimele khona,” kuchaza yena.
Uthe ngesikhathi esefika kuyena umufi wamtshela ukuthi enye into ebibaxabanisa ukuthi umsolwa ubemphoqa ukuthi bazohlala ndawonye. Utshele Isolezwe ukuthi okunye obekubaxabanisa ukuthi umufi ubekade emkhuza ngokuthi angathathi izindaba zakhe azitshele abakubo.
“Bekuthi njalo uma bexabane nodadewethu ahambise izindaba zabo ekhaya kanti udadewethu ubengakuthandi lokho nokuyikho athi yabaxabanisa. Wathi umsolwa wahamba ngemuva kokumkhuza waphinde wabuya ngoba esemtshele ukuthi abahlukane akasamfuni wangena ngewindi wamcindezela phansi wamtshela ukuthi ithuna lakhe selifikile emkhombisa ummese,” kuchaza yena.
Ngemuva kwalokho umufi kuthiwa watshela udadewabo ukuthi wezwa ngento imgwaza emqaleni wabona sekuphuma igazi ngamakhala nomlomo.
“Wahlala izinsuku ezimbili esibhedlela washona odokotela basitshela ukuthi wophele ngaphakathi igazi bese lifike emaphashini. Umsolwa akakaze afonele ekhaya achaze ukuthi umufi usemlimazile,” kusho yena.
Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba lithe kukhona incwadi umsolwa ayibhalile echaza imbangela yokubulala uNksz Mkhize.
Iphoyisa lithe ube esenxusa ukuthi lingenzeki iphutha lokuthi uma eshona uNksz Mkhize akhonjiswe isidumbu sakhe ngoba nguyena oyimbangela yokuthi azibulale.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Thulani Zwane uthe kuphenywa icala lokufa kwalona wesifazane kanti akukaboshwa muntu.
Ukuqinisekisile ukuthi ikhona incwadi abayitholile ebhalwe umsolwa egcinwe emaphoyiseni.